Umaki: uhola | Martech Zone
ULwesithathu, April 12, 2017 ULwesine, April 13, 2017 Douglas Karr
Namuhla kusihlwa, bengikade ngihamba ngebhayisikili nozakwethu futhi phakathi kokuthukuthela nokuthukuthela besikhuluma ngezindlela zethu zokuthengisa zamabhizinisi ethu. Sobabili savumelana ngokuphelele ukuthi ukuntuleka kwesiyalo esisisebenzisile ekuthengiseni kwethu bekuvimbela izinkampani zethu zombili. Umkhiqizo wakhe wesoftware uheha imboni ethile nosayizi othile, ngakho-ke ubesazi vele ukuthi angubani amathemba akhe. Ibhizinisi lami lincane, kepha sigxile kakhulu kokunye
Zimbalwa izinkampani ezinamandla okuthengisa ukubiza wonke amathemba akhona. Lokho kusho ukuthi imvamisa ishiyelwa ethubeni noma umuzwa wokuzwa isisu ukuthi yimaphi amathemba okufanele uchithe isikhathi esiningi ngawo. Kaningi kunalokho, lokhu kusho inhlekelele ezinkampanini. Bachitha isikhathi kumathemba angasoze aguqulwa ngenkathi kungenzeka babe nemikhombandlela eshisayo futhi elungele ukwenza ibhizinisi. Amapulatifomu wokukhiqiza ahamba phambili anikezela ngendlela ehlukile lapho